Manala ireo tavy miandrona ambany helika
Azo esorina ny tavy eo amin’ny lamosina. Ireo miandrona eo ambanin’ny helika sy izay amin’ny andaniny roa amin’iny valahana iny dia azo foanana tsikelikely ihany koa . Ireto fampihetseham-batana ireto fotsiny no ataonao matetika.
Mipetraka eo ambony seza iray. Atao mifanakaiky ny tongotra roa. Somary miondrika dia mitazona zavatra mavesatra ny tanana roa. Raha tsy manana “haltères” dia tavoahangy feno rano no ampiasaina. Akarina avy any amin’ny andaniny roa amin’ny vatana ny tanana mibata ilay “haltères” na ilay tavoahangin-drano mandrapahatonga ny tanana hitovy tantana amin’ny soroka. Tazonina segaondra vitsy vao averina amin’ny paozy niaingana. Izay fihetsika izay no averina in-10. Miato kely dia mamerina andiany iray hafa. Manao andiany 4 .
Mitsangana indray eto. Mitazona “haltères” iray avy hatrany ny tanana. Somary ahondrika toy ny teo ihany ny tapany ambony amin’ny vatana ary tazonina hahitsy hatrany ny lamosina. Ampidinina hifanakaiky ny tanana roa dia akarina moramora amin’ny andaniny roa amin’ny vatana, atao mitovy tantana amin’ny soroka sy ny lamosina. Izay fihetsika izay no averina im-10 isaky ny andiany. Manao andiany 4.
Atehaka amin’ny tany ny tanana roa. Ny lohan-tongotra kosa no itehenan’ny tongotra. Aforitra mivoaka mifandimby amin’ny andaniny roa amin’ny vatana ny lohalika. Atao in-20 isaky ny lafy dia miato kely vao mamerina andiany manaraka. Manao andiany 4.
Mijoro mahitsy indray kosa eto. Mitazona “haltères” ihany isaky ny tanana. Ampidirina tsara ny hoza-kibo. Atao mahitsy kosa ny lamosina. Sady aforitra ny kiho no akarina any amin’ny soroka ireo “haltères”. Atao re hoe misy misintona ny sisin’ny valahana sy ny eo ambanin’ny helika. Atao im-10 izay fihetsika izay dia averina in- 4 izany.
Ny fanaovana ireo fampihetseham-batana ireo matetika no hahitana vokatra haingana. Tsara raha ampitomboina ny lanjan’ny “haltères” mba hivoatra hatrany ny hasarotan’ny ezaka. Atao miadana tsara ny fihetsika.